Manome voninahitra an’Andriamanitra ny Mpanjaka (Dan. 6:24-28)
Midera an'Andriamanitra ny mpanjaka ao amin'ny Dan. 6:24-28. Inona no nambarany tamin'izany?
Nidera an'Andriamanitra i Dariosa, ary ampahany manan-danja tao amin'ny tantara izany fiderana nataony izany. Asehony amin'izany ny fahatakarany fa mifehy ny toe-javatra Andriamanitra. Araka izay efa hitantsika dia nidera an'Andriamanitra ihany koa i Nebokadnezara (Dan. 2:20-22; Dan. 3:28,29; Dan. 3:31-33; Dan. 4:31-34). Tahaka ny nanomezan'i Nebokadnezara voninahitra an'Andriamanitra no nanaovan'i Dariosa izany. Nanao lalàna vaovao ihany koa ny mpanjaka, izay mibaiko ny "hangovitan'ny olona sy hatahorany eo anatrehan'Andriamanitr'i Daniela" - Dan. 6:27.
Nanao fahagagana Andriamanitra mba hanavotana ny ain'i Daniela; novaliany soa ny finoany. Nofaizin'Andriamanitra ireo lehilahy ratsy fanahy, ary hitan'ny rehetra fa manam-pahefana tokoa Izy ary mifehy ny zava-drehetra. Maneho amintsika izay hiseho eto amin'izao tontolo izao amin'ny andro farany izany tantara izany: hamonjy ny olony Andriamanitra ary hanafay ny ratsy fanahy. Haseho ho hitan'ny tany sy ny lanitra ny fahefana sy ny voninahitr'Andriamanitra. Vakio ny Dan. 6:25. Inona no olana hitanao ao amin'io toko sy andininy io? Inona no maha-olana izany? Ny amin'ny vady aman-janak'ireo mpitarika ireo no olana. Raha ny fantatsika mantsy dia tsy manan-tsiny izy ireo kanefa natsipy tao an-davaky ny liona niaraka tamin'ireo tandapa be fialonana ireo. Ahoana no hanazavantsika izany? :
Voalohany, tokony ho fantatsika fa ny lalàna persianina dia milaza fa afaka manasazy ny mpanao ratsy ny mpanjaka, ary tafiditra ao anatin'izany ny fianakavian'ireo. Tamin'ny andron'ny TT, raha misy olona iray manao ratsy dia tompon'andraikitra amin'izany heloka izany koa ny fianakaviany iray manontolo. Tsy midika izany fa mety io fiheverana io, saingy manampy antsika hahatakatra fotsiny ny fitondrana ny toe-javatra teo ambany lalàna persianina izany.
Faharoa, tokony homarihintsika fa mitantara ny toe-javatra ny Baiboly, fa tsy hoe mankasitraka ny fihetsiky ny mpanjaka tsy akory. Raran'ny Baiboly aza ny famonoana ny zanaka noho ny amin'ny heloky ny ray aman-dreniny (Deo. 24:16). Eo anatrehan'ny tsy rariny tahaka izany sy ireo maro hafa, inona no fampaherezana azonao sintonina avy amin'ny toko sy andininy tahaka ny 1Kôr. 4:5? Inona no ambaran'izany, ary nahoana no zava-dehibe ny hevitra asongadiny?